I-Deer Wood Cabin - Yakhelwe Emvelweni - I-Airbnb
I-Deer Wood Cabin - Yakhelwe Emvelweni
Beaver Cove, Maine, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Mark
I-Deer Wood Cabin iyikhabethe elithokomele emahlathini aseMaine elinikeza indlela enethezekile yokujabulela imvelo.
I-Deer Wood Cabin yakhelwe ehlathini endaweni engaphansi kwamahektare amathathu. Ukuvakashelwa cishe kwansuku zonke kwezinyamazane kwenza lokhu kube indlela enhle yokuxhumana nemvelo.
Igumbi lokuhlala elinethezekile linamasofa amabili, i-recliner kanye ne-Roku TV exhunywe ku-inthanethi. Isidlali seDVD nokukhethwa kwamamuvi nakho kukhona ukuze ujabulele. Isitofu sezinkuni sizokufudumeza ngemva kosuku lokuhlola i-North Woods yaseMaine.
Uma ubheka emafasiteleni kuvamile ukubona izinyamazane ziwela endaweni. Uma unenhlanhla, ungase ubone i-moose izulazula.
Ikhishi linezilungiselelo zendawo ezingu-8, kanye namabhodwe amaningi, amapani, ingilazi, izinto zasekhishini nezinto zesiliva. Kukhona nesiqandisi esikhulu, uhla lwegesi, ihhavini, i-toaster, i-coffeemaker kanye ne-microwave ukuze kube lula kuwe.
Isitebhisi esivunguzayo siholela esitezi esiphezulu endaweni yokuhamba phakathi kwamagumbi amabili okulala nezikhala ezimbili eziphezulu. Amakamelo okulala ngalinye linombhede wendlovukazi futhi indawo ephezulu yesitezi inombhede ogcwele namawele okwenza imibhede engu-6 isiyonke.
Igumbi lokugezela elikhulu lineshawa eline-heater yamanzi edingekayo, indlu yangasese kanye nosinki.
Kukhona igumbi lokuwasha elinewasha elinosayizi ogcwele kanye nesomisi. Leli gumbi lokuwasha linendlu yangasese nosinki omncane.
Ngaphandle nje komnyango ongemuva kunendawo yokosa inyama enendawo yokudlela yangaphandle. Lalela kahle uzwe amaloon ekhala echibini.
Umgodi womlilo ongaphandle uyindlela enhle yokujabulela isikhathi somndeni. Imisindo evame kakhulu ozoyizwa endaweni yomlilo uhleko ngenkathi izingane zosa ama-marshmallows.
Ukushayela iDemo (noma ukuhamba ngezinyawo) phansi komgwaqo ibhishi lamalungu omphakathi kuphela elitholakalayo ukuze ulisebenzise. Amanzi ahlanzekile e-Moosehead Lake ayindlela enhle yokupholisa phakathi nezinyanga zasehlobo. Indawo yokubhukuda ivamise ukuba nesihlenga sezingane (kanye nabantu abadala abadlalayo) abangagxuma kuso. Indlu futhi inebhola le-moring lesikebhe sakho. Sicela usithinte uma ungathanda ukusebenzisa i-moring ngemithetho ephathelene nedokodo lomphakathi.
I-Deer Wood Cabin iyindawo enhle ye-snowmobile noma i-ATV. Kunendawo yokupaka eningi yama-trailer akho futhi umzila usendleleni nje. Ukufinyelela kalula ku-ITS 85/85 noma echibini ebusika.
I-Deer Wood Cabin iseduze ne-Moosehead Lake futhi imizuzu eyi-15 kuphela ukusuka edolobheni laseGreenville elinezindawo zokudlela ezinhle nezitolo (igrosa noma izimpahla zasendaweni).
Shona enyakatho futhi i-Kokadjo iqhele ngemizuzu engu-20 nje. Kulabo abachithe isikhathi kule ndawo, i-Kokadjo yaziwa njengendawo yokugcina ngaphambi kweNorth Woods. Le ndawo inikezela ngokudoba okuhle, ukuthwebula izithombe nokubukwa kwezilwane zasendle namanye ama-moose aminyene kakhulu esifundazweni saseMaine.
I'm a family guy who enjoys hiking, fishing, boating, snowmobiling, photography and sitting around the campfire.
Kunebhokisi elingukhiye lokuvumela ukungena (nobumfihlo) kushejuli yakho. Asihlali endaweni kodwa sitholakala ngombhalo nange-imeyili. Sineqembu elikhulu labantu bendawo elizobhekana nanoma yisiphi isimo esingase sivele.
Hlola ezinye izinketho ezise- Beaver Cove namaphethelo